Fary - Wikipedia
Ny fary dia zavamaniry famboly izay ao amin' ny karazana Saccharum (fianakavian' ny Poaceae na Gramineae, zana-pianakavian' ny Panicoideae), volena indrindra hahazoana siramamy izay alaina avy amin' ny tahony. Eo anelanelan' ny 2 sy 6 m ny halavan' ny fary ary 5 sm ny savainony rehefa lehibe.
Teo amin' ny tantara dia efatra no karazana fary novolen' ny olombelona voalohany indrindra avy amin' ny natiora, indrindra ny Saccharum officinarum (nataon' ireo Papoa any Ginea Vaovao), ny Saccharum sinense (nataon' ireo Aostrôneziana tany Taioàna sy tany amin' ny tapany atsimo amin' i Sina), ny Saccharum barberi dia novolena tany India taorian' ny fampidirana ny Saccharum officinarum. Novolena tany Ginea Vaovao koa ny Saccharum robustum.
Ankehitriny ny Saccharum officinarum dia ampivadina amin' ny Saccharum spontaneum, ny Saccharum robustum, ny Saccharum sinense, ary ny Saccharum barberi mba hahazoana vokatra tsara kokoa. Nanampy azy ireo ny Miscanthus sy ny Narenga ary ny Erianthus. Misahana ny famokarana siramamy betsaka indrindra (70 hatramin' ny 80 %) ny fary. Anamboarana alkaola (ny etanôly) koa ny ranom-pary.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fary&oldid=1038880"
Voaova farany tamin'ny 13 Oktobra 2021 amin'ny 11:17 ity pejy ity.